Bogga ugu weyn Software -ka Maaliyadda Shakhsi ahaaneed ee ugu Fiican Sanadka 2021
Maalintii hore, markii dadku u baahnaayeen inay la socdaan dhaqaalahooda, waxay yeelan lahaayeen buug -yare. Sidii horeba u fiicnayd, waxay u badan tahay inay culays ku haysay dadkii hore. Nasiib wanaag annaga, tiknoolijiyaddu waxay naga caawisay inaan si hufan u shaqeyno marka ay timaaddo ilaalinta raadraaca maaliyadeena. Waxaa jira softiweer maaliyadeed shaqsiyeed oo lacag la'aan ah oo kala duwan oo caawiya shaqsiyaadka, qoysaska, iyo xitaa shirkadaha, iyagoo hubinaya in dhinac kasta oo maaliyaddoodu ay ku socoto.
Softiweerka maaliyadeed ee shaqsiyeed waxaa loo adeegsan karaa dabagalka kharashaadka, sameynta miisaaniyad, iyo qorsheynta kharashyada mustaqbalka. Qaar ka mid ah software -ka ayaa ku kala duwan taageerada muuqaalka, koodhka softiweerka iyo daahfurnaanta horumarinta, astaamaha app -ka moobilka, hababka soo dejinta, qaabka lacag -abuurka, asturnaanta, iyo dhaqannada kaydinta xogta. Taasi waxay ka dhigan tahay inay kaa caawin karaan sidii aad u baran lahayd aasaaska aasaasiga ah, aad uga sii fiicnaan lahayd maareynta lacagtaada, oo xitaa kaa caawin lahayd inaad ogaato siyaabo aad ku gaari karto yoolalkaaga maaliyadeed ee muddada-dheer.
Waxaa jira softiweer maaliyadeed shaqsiyeed oo lacag la'aan ah oo kala duwan oo wax ka qabta dhinacyada kala duwan ee maaliyadda. Go'aaminta software -ka kugu habboon ayaa ku xiran baahidaada dhaqaale iyo hadafyadaada hadda.
Maqaalkan, waxaad ka heli doontaa softiweerka maaliyadeed ee ugu fiican sannadka 2021; si taxaddar leh u akhri.
Waa kuwee Software -ka ugu Fiican Maaliyadda Shaqsiga?
Ma jiraa Maaliyad Maaliyadeed Shakhsiyeed oo ka Wanaagsan Degdeg?
Buugaagta Degdegga ah ma loo isticmaali karaa Maaliyadda Shakhsi ahaaneed?
Waa imisa Qiimaha Software -ka Maaliyadda Shaqsiga?
Waa Maxay Software -ka Maaliyadeed ee Shakhsi ahaaneed ee ugu Fiican Sanadka 2021?
#6 Buug -hubin Cad
#7 Raasamaalka Shaqsiga
#9 Bangiga Guriga
Sahan laga sameeyay dhammaan barnaamijyada maaliyadeed ee shaqsiyeed ee la heli karo, waxaa lagu ogaaday in softiweerka ugu fiican dhammaan dhinacyada maaliyadda shaqsiyeed uu yahay Quicken.
Ahaanshaha meheradda muddo ka badan 30 sano, ujeeddada Quicken waa inay caawiso isticmaaleyaasheeda si ay u hoggaamiyaan nolol maaliyadeed oo caafimaad leh. Iyagu ma ay diiradda saaraan kaliya miisaaniyadda kaliya laakiin sidoo kale maalgashiga iyo qorshayaasha howlgabka.
Waxay kaloo leeyihiin qorshe sanduuq kulliyadeed oo ay heli karaan qoysaska iyo xitaa ardayda. Diiwaanka 17 milyan oo macaamiil ah, waa aamin in la yiraahdo Quicken, adeegsadayaashu waxay ku jiraan gacmo wanaagsan.
Akhri ALSO: 10 App -ka Miisaaniyadda ugu Fiican Lammaanaha sanadka 2021
Quicken ayaa lagu qiimeeyaa ilaha ugu badan iyada oo ay ugu wacan tahay kala duwanaanshaha iyo baaxadda ballaadhan ee ikhtiyaarrada maaliyadeed ee shaqsiyeed, aad bay u adag tahay in la magacaabo software kasta oo kale si ka fiican.
Si kastaba ha noqotee, waxaa jira softiweer kale oo maaliyadeed oo shaqsiyeed oo aad loogu taliyo. Buoni waxay ku timaaddaa ilbidhiqsi dhow iyada oo la socota qalabkeeda dabagalka miisaaniyadda oo aan fiicnayn. Software -ka ayaa u saamaxaya isticmaaleyaasheeda inay la socdaan bixinta biilkooda, yoolalka miisaaniyadda, Iyo maalgelinta. Waxay sidoo kale u saamaxaysaa dadka isticmaala inay hubiyaan dhibcaha dhibcaha waxayna sidoo kale ka caawiyaan inay la socdaan oo ay ilaaliyaan dhibcaha dhibcaha wanaagsan.
Waxaa laga yaabaa inaysan u sarrayn sida Quicken, laakiin barnaamijyadooda ayaa ka caawiyay malaayiin macaamiil inay gaaraan heerar maaliyadeed oo la yaab leh.
Buugaagta Degdegga ah Xisaabinta Guriga iyo softiweerka Maaliyadda Shaqsiga ayaa ka mid ah ikhtiyaarrada softiweerka xisaabinta guriga ugu sarreeya maadaama ay tahay mid isticmaale-saaxiibtinimo leh, wax-ku-ool ah, waxay kaa caawineysaa inaad la socoto kharashaadka, maareyso biilasha, diyaariso miisaaniyadaha, rasiidhada ku wada sawirto hal meel.
In kasta oo softiweerkan loo sameeyay dabagalka xisaabaadka ganacsiyada yaryar, haddana waxaa loo tixgelin karaa inuu yahay software maaliyadeed shaqsiyeed oo wanaagsan. Sida ku cad maqaalkan ku saabsan Ilaalinta SLC bogga blogga, Quickbooks waxaa loo isticmaali karaa saddex siyaabood marka ay timaaddo in dib loogu soo celiyo softiweer maaliyadeed shaqsiyeed.
Maaraynta Socodka Lacagta
Bixinta Automate Biilasha iyo Dakhliga
Warbixinta Maaliyadeed ee Qoyska
Kuwani waa astaamaha koontada ganacsiga yar yar; hase yeeshee, dib ayaa loo soo celin karaa waxaana loo isticmaali karaa maaliyadda shaqsiga ee isticmaalaha.
Qiimaha celceliska softiweerka maaliyadeed wuxuu u dhexeeyaa qiyaastii $ 6- $ 12 bishii. Heerkani wuxuu ku xiran yahay qorshaha rukunka ee uu doortay isticmaalaha. Dabcan, qiimo -dhimisyada waa la heli karaa haddii adeegsaduhu go'aansado inuu bixiyo lacag sannadle ah.
Waxaa jira softiweer maaliyadeed shaqsiyeed oo la heli karo kaas oo qaata lacag hal mar ah, laakiin taasi waxay kuxirantahay doorbidka isticmaalaha.
Tiro aad u badan oo ka mid ah barnaamijyadan maaliyadeed ee shaqsiyeed ayaa ku dallacaya dinaar quruxsan adeegyadooda, si kastaba ha ahaatee, waxaa jira dhowr ujeedadoodu tahay inay ka caawiyaan adeegsadayaasha wax yar oo aan kharash lahayn. Waa kuwan 10 -ka ugu wanaagsan ee softiweerka maaliyadeed shaqsiyeedka ah ee ugu wanaagsan sanadka 2021.
Intuit Buoni waa qorsheeye miisaaniyadeed oo bilaash ah oo onlayn ah. Software -kan wuxuu ururiyaa dhammaan macluumaadkaaga maaliyadeed, isagoo ku siinaya dulmar guud oo ku saabsan miisaaniyaddaada, kharashaadka, biilasha, iyo dhibcaha dhibcaha. Waxaad samayn kartaa miisaaniyaddaada, dejin kartaa yoolal iyo xusuusiyayaal, oo aad isku waafajin kartaa xogtaada inta u dhexaysa shabakadda iyo barnaamijyada. Qarsoonaanta iyo xaqiijinta arrimo badan ayaa hagaajinaya amniga. Waxa kale oo aad isticmaali kartaa Mint si aad ula socoto maalgelintaada.
Dooxo waxay ka caawisaa adeegsadeyaasheeda inay ka xoroobaan culeyska biilka, ilaaliyaan caafimaadka maaliyadeed, iyo inay gaaraan yoolal maaliyadeed. Doxo waxay sidoo kale ka caawisaa adeegsadeyaasheeda dabagalka bixinta biilka, la socodka xaaladdooda iyo sidoo kale la socoshada taariikhdooda lacag bixinta.
GnuCash waa softiweer desktop oo dabagala xisaabaadka bangiga, kaydka, dakhliga, iyo kharashyada. GnuCash waxay kaloo bixisaa aaladaha xisaabaadka ganacsiga yar-yar ee maareynta macaamiisha iyo iibiyeyaasha, qaansheegta iyo bixinta biilka, iyo xitaa mushaharka.
Software -kan xisaabinta shaqsiyeed wuxuu awood u siinayaa qof walba inuu si fudud u maareeyo dakhliga iyo kharashyada. Alzex Softiweerka Maaliyadda Shaqsiga ayaa u fudud bilowga inay ku bilaabaan iyada oo aan u baahnayn dadaal si ay ula socdaan dhaqaalaha waxayna siisaa adeegyo iyo goobo badan oo adeegsadayaasha xirfadda leh. Gnucash wuxuu u saamaxayaa dadka isticmaala inay si qoto dheer u fahmaan caafimaadka maaliyadeed ee miisaaniyadda qoyska, aqoonsadaan aagagga kharash -dhaafka, iyo inay yareeyaan miisaaniyadda. Softiweerka xisaabinta shaqsiyeed, oo ay ku jiraan jadwalka, wuxuu kuu oggolaanayaa inaad la socoto dakhliga la filayo iyo kharashaadka, iyo sidoo kale inaad aragto inta lacag ee aad yeelan doonto taariikh dambe.
AceMoney Lite wuxuu ka caawiyaa dadka isticmaala maareynta miisaaniyadooda, ku dabagala dhaqaalahooda lacago badan, la socodka maalgashigooda, iyo falanqaynta caadooyinka kharashaadka. Isticmaalayaasha ayaa sidoo kale samayn kara macaamil bangi oo onlayn ah.
#6 Nadiifi Buugga Hubinta
ClearCheckbook waa aalad maareyn maaliyadeed oo dhameystiran. Waxay bixiyaan qalab maaliyadeed oo kala duwan, oo ay ku jiraan raadraaca biilka, aaladaha miisaaniyadda, warbixinnada, faylalka maalgelinta, iyo raadraaca yoolka kaydka, iyo kuwo kale. Isticmaalayaashu waxay gacanta ku geli karaan macaamil ganacsi ama waxay ku xiri karaan bangigooda ClearCheckbook si macaamilkooda si toos ah looga soo dejiyo.
#7 Qasnadda Shaqsiyeed
Qasnadda Shaqsiyeed waxay bixisaa barnaamij maaliyadeed oo lacag la'aan ah oo loogu talagalay raadinta maalgashiyada iyo qorsheynta hawlgabka, iyo sidoo kale aaladaha socodka lacagta caddaanka ah, qarashka, miisaaniyadda, iyo qiimaha saafiga ah. Raasamaalka Shakhsiyeed wuxuu diiradda saaraa maalgelinta, oo tusaysa dadka isticmaala waxqabadka faylalka tacliimeed waqti ka dib wuxuuna ka caawinayaa samaynta go'aannada mustaqbalka.
saaxiib waa barnaamij maaliyadeed iyo miisaaniyad shaqsiyeed, oo loogu talagalay kuwa aan lahayn asal dhaqaale ama wax yar. Buddi waxay ku kaydin kartaa xogta maaliyadeed furaha erayga sirta ah waxaana loogu talagalay inay fududaato in la isticmaalo xitaa haddii uusan isticmaaluhu lahayn khibrad dhaqaale oo hore. Miisaaniyadda, dabagalka xisaabta, iyo warbixinnada maaliyadeed ee shaqsiyeed ayaa ka mid ah astaamaha, laakiin adeegsadayaashu waa inay gacanta ku galaan macaamil ganacsi.
Barnaamijkan maaliyadeed ee shaqsiyeed wuxuu ka caawiyaa dadka isticmaala inay maareeyaan xisaabintooda shaqsiyeed. Iyadoo loo tarjumay 56 luqadood adeegsadeyaasheeda, HomeBank wuxuu fududeeyaa maaliyadda shaqsiyeed ee adeegsadaha si loo fahmo adeegsiga garaafyada iyo jaantusyada.
KMyMoney waa maareeye maaliyadeed shaqsiyeed oo ka shaqeeya aalado badan. Waxay bixisaa muuqaalo maaliyadeed oo aad u ballaaran iyo qalab si ay uga caawiso dadka isticmaala inay si taxaddar leh ula socdaan dhaqaalahooda shaqsiyeed. KMyMoney waxay hore ugu jirtaa inta badan astaamaha laga helay maareeyayaasha maaliyadeed shaqsiyeed ee ganacsi ahaan la heli karo. Waxay hubisaa in diiwaanada maaliyadeed la dabagalo oo la qoro sida ay tahay.
Waa maxay astaamaha ku jira softiweerka maaliyadeed ee shaqsiyeed?
Bangiyada onlaynka ah, garaafyada, iyo warbixinnada, diiwaannada akoonka, xusuusiyeyaasha, kooxaha warbixinta, saadaasha dheelitirka, dib -u -heshiisiinta bayaan, soo -dejinta iyo dhoofinta, taageerada koontada maalgashiga, daabacaadda jeegga, app -ka moobiilka, biilka, iyo xusuusiyeyaasha dhigaalka ayaa ah dhammaan astaamaha softiweerka maaliyadeed ee shaqsiyeed.
Waa maxay habka ugu wanaagsan ee loo maareeyo dhaqaalaha shaqsiga?
Halkaan waxaa ah siyaabo aad ku maareyn karto dhaqaalaha shaqsiga:
Ogow oo fahan xaaladdaada maaliyadeed, dejiso yoolal maaliyadeed, samee miisaaniyad, samee sanduuq degdeg ah, u kaydi hawlgab, Bixi daynta
Ma jiraa beddel ka fiican oo degdeg ah?
Miinadu waa beddel wanaagsan. Si kastaba ha noqotee softiweerka kale ee maaliyadeed ee lagu taliyay waxaa ka mid ah Pocketsmitch, YNAM, iyo Betterment.
Lacag -bixinta Quicken ma la sameeyaa sannad walba?
Quicken wuxuu bixiyaa qiimeyn isbarbar socda oo ku saleysan astaamaha uu soo xulay adeegsadaha iyo sidoo kale badeecaddu. Degdeg, sida codsiyada softiweerka kale ee maaliyadeed ee shaqsiyeed, ayaa hadda ku shaqeeya ku -biiritaan.
Miinadu ma u fiican tahay maaliyadda shaqsiga ah?
Mint waa adeeg maaliyadeed shaqsiyeed oo aad u wanaagsan oo helay abaalmarino badan oo Xulashada Tifaftiraha fududeyntiisa, adeegsigiisa, iyo aaladaha maaliyadeed ee caqliga leh.
In aad si dhow isha ugu hayso kharashaadkaagu waa qayb muhiim ah oo ka mid ah maareynta lacagta guuleysta. Adeegsiga softiweer iyo adeegyo lacag la'aan ah waa hal dariiqo oo lagu dhammayn karo tan. Softiweerka maaliyadeed ee bilaashka ah ayaa si la yaab leh waxtar ugu leh dabagalka kharashaadka, abuurista iyo maaraynta miisaaniyadda, iyo socodsiinta warbixinnada. Hubi inaad dhex gasho xulashooyinka kor ku xusan si aad u ogaato software -ka maaliyadeed ee shaqsiyeed ee ku habboon baahiyahaaga.
20ka ugu sarreeya ee softiweerka maaliyadeed ee shaqsiyeedka ah ee 2021
Lacag intee le'eg ayay tahay inaan sameeyo: Istaraatiijiyadda Maaliyadeed ee Shaqsiga ee 2021
Sida Loo Maalgaliyo Beeraha ROI Sare 2021 | Tilmaan Buuxo
Adeegga Lambar 800 ee ugu Fiican | Sida Ganacsigaagu u soo jiidan karo Khadka Aaladda-la'aanta ah
Helitaanka lambarka 800 ee bilaashka ah ee degdega ah waa hawl fudud in la fuliyo, laakiin way adagtahay in la qiyaaso…
Qaar naga mid ah waxay leeyihiin shuruudo canshuureed oo adag, halka qaar kalena ay leeyihiin si toos ah. Laakiin waxaas oo dhan, waxaan wadaagnaa…